China NDIR Gas Sensor Single Channel ASIC AFE Integrated Carbon Dioxide CO2 Gas Detector-SSG11DF42G1 mpanamboatra sy mpamatsy | Masoandro
Ny fianakavian'i SSG11DF42G1 manana sensor thermopile tafiditra ho an'ny NDIR (detection gas infrared) dia fantsom-pahalalana thermopile fantsona iray izay manana voltase famoahana output mifanitsy amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Ny sivana fandefasana tarika tery infrared eo alohan'ny sensor dia mahatonga ilay fitaovana ho mora tohina amin'ny fifantohana entona lasibatra.
Ny fianakavian'i SSG11DF42G1 manana sensor thermopile tafiditra ho an'ny NDIR (detection gas infrared) dia fantsom-pahalalana thermopile fantsona iray izay manana voltase famoahana output mifanitsy amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Ny sivana fandefasana tarika tery infrared eo alohan'ny sensor dia mahatonga ilay fitaovana ho mora tohina amin'ny fifantohana entona lasibatra. Ny SSG11DF42G1 misy karazana puce sensor sensor thermopile CMOS vaovao dia manasongadina ny fahatsapana tsara, ny mari-pahaizana coefficient amin'ny maripana kely ary koa ny fitomboana ambony sy ny fahatokisana. Ny chip ASIC AFE (Analog Front End) dia ampifandraisina amin'ny sensor thermopile, manome tombony 1000 ho an'ny fantsom-panafody kely an'ny sensor thermopile. Ny voltam-pandefasana offset dia ampidirina ao amin'ny input sensor. Ny valin'ny output sensor dia azo ovaina mivantana amin'ny alàlan'ny ADC, izay manaloka ny amplifier Zero-Drift ary ny circuit DC-DC. Ny puce referrer thermistor avo lenta dia natambatra ihany koa ho an'ny fanonerana mari-pana manodidina.
SSG11DF42G1 NDIR Infrared CO2 gazy sensor dia karazana mahazatra, sensor kely habe, mampiasa fotokevitra tsy miparitaka (NDIR) hamantarana ny fisian'ny CO2 eny amin'ny rivotra, miaraka amin'ny fifantenana tsara, miankina amin'ny tsy oxygen ary fiainana lava. Ny sensor an'ny mari-pana namboarina dia afaka manonitra ny mari-pana; ary misy output digital sy output voltage voltage. Ity sensor sensor infrared karazana iraisana ity dia novolavolain'ny fampidirana henjana ny teknolojia detection gas infrared matotra, ny famolavolana hazavana optika Precision ary ny famolavolana faribolana ambony.
Ampiasaina be izy io ho an'ny vata fampangatsiahana HVAC, fanaraha-maso ny rivotra anaty, fanaraha-maso ny fizotran'ny indostrialy ary fiarovana, fambolena sy fiompiana. Portable CO2 Ny mari-pana amin'ny mari-pana momba ny mari-pana amin'ny rivotra mpanara-maso infrared NDIR Detector Indoor outdoor; mpanara-maso kalitaon'ny rivotra izay mahatsikaritra Carbon dioxide (CO2), Temperature ary fampiharana indostrialy maro hafa.
Teo aloha: NDIR CO2 Carbon Dioxide Gas Sensor Smart Home-Air Quality Monitor-SSG11DF42
Manaraka: Dual Channel NDIR Sensor Methane (CH4) Detectible Gas Detector-SDG11DF33
Carbon Dioxide CO2 NDIR Gas Detector Dual Chann ...
NDIR CO2 Carbon Dioxide Gas Sensor Smart Home-A ...
ASIC AFE Integrated CO2 NDIR Gas Sensor Dual Ch ...